ဆေးပညာဆိုသည်မှာ ကုသခြင်းနှင့် ဆိုင်သော သိပ္ပံပညာသာ မက အနုပညာတစ်မျိုးဟုလည်း ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ ဆေးပညာတွင် ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ကုသခြင်းဖြင့် လူသားတို့၏ ကျန်းမာရေးကို ထိန်သိမ်းရန် သို့ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် အတွက် အမျိုးမျိုးသော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ဆိုင်သော လုပ်ငန်းစဉ်များပါဝင်နေသည်။ ခေတ်သစ်ဆေးပညာတွင် ကျန်းမာရေးသိပ္ပံ (health science) ၊ ဇီဝဆေးပညာ သုတေသတန နှင့် ကျန်းမာရေး နည်းပညာတို့ကို အသုံးပြု၍ ပုံမှန်အားဖြင့် ဆေးပေးခြင်း၊ခွဲစိတ်ခြင်းနှင့် အခြားကုသနည်းလမ်းများဖြင့် ထိခိုက်မှုနှင့် ရောဂါတို့ကို ဆန်းစစ်ရန်နှင့် ကုသရန် အသုံးပြုသည်။ ဆေးပညာ၏ အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရ medicine သည် လက်တင်ဘာသာစကား ars medicina မှ ဆင်းသက်လာပြီး ကုသခြင်း အနုပညာဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာနှင့် လက်တွေ့ကုသရေးတွင် ကျွမ်းကျင်မှု (clinical expertise) တို့မှာ ခေတ်သစ်ဆေးပညာ၏ ကျောရိုးများဖြစ်သော်လည်း တကယ်တမ်း အောင်မြင်စွာကုသနိုင်ရေးအတွက်မူ လူနာနှင့် မျက်နှာခြင်းဆိုင်၍ သာမန်လူသားတို့၏ ခံစားမှုနှင့် အရေးတယူဂရုစိုက်မှု အစရှိသောအရာများကို ပြသရန်လိုပြီး အင်္ဂလိပ်တွင် "bedside manner" ဟုခေါ်ကြသည်။
သမားတော်မှ လူနာအားဆေးကုသနေပုံ လိုဗာပြတိုက်၊ ပဲရစ် ၊ ပြင်သစ်
ဆေးပညာနှင့်ဆိုင်သော ရှေးဦးပိုင်းမှတ်တမ်းများကို အိန္ဒိယတိုက်တွင် ရှိသော အာယုဗေဒ ဆေးပညာ၊ ရှေးခေတ် အီဂျစ်ဆေးပညာ၊ တရုတ်ရိုးရာဆေးပညာ၊ အမေရိကား နှင့် ရှေးခေတ်ဂရိဆေးပညာတို့တွင် တွေ့ရသည်။ ဆေးပညာ၏ ဖခင်ကြီးဖြစ်သော ဟစ်ပိုကရေးတီး (Hippocrates) သည် ကျိုးကြောင်းဆက်စပ် တွေးခေါ်မှုနှင့်ဆိုင်သော နောက်ပိုင်းခေတ် ဆေးပညာ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်များကို ချခဲ့ကြသည်။ ဟစ်ပိုကရေးတီးသည် ဆရာဝန်များ လိုက်နာရန် ကျင့်ဝတ်နှင့်ကျမ်းကျိန်လွှာ ဟစ်ပိုကရေးတစ် အုတ်သ်(Hippocratic Oath) ကို စတင် မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး ထိုကျမ်းကျိန်လွှာကို ယခုတိုင် အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ဟစ်ပိုကရေးတီးသည် ရောဂါများကို acute, chronic, epidemic & endemic ဆိုပြီး အမျိုးအစားခွဲခဲ့သည့် ပထမဆုံးလူ ဖြစ်ပြီး ဆေးပညာအခေါ်အဝေါ်များဖြစ်သည့် "exacerbation, relapse, resolution, crisis, paroxysm, peak, and convalescence" တို့ကို သုံးစွဲခဲ့သည်။ ဂရိသမားတော် ဂေလင် (Galen) သည် ရှေးခေတ်ဆေးပညာလောက၏ ကြီးကြယ်သော ခွဲစိတ်ဆရာဝန် တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဦးနှောက်ခွဲစိတ်ခြင်း၊ မျက်စိခွဲစိတ်ခြင်းတို့ အပါအဝင် ခွဲစိတ်ခြင်း မြောက်များစွာကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၇၅၀ CE နောက်ပိုင်းတွင် မူစလင်အာရပ်တို့သည် ဟစ်ပိုကရေးတီး၊ ဂေလင်၊ ဆပ်ရှလျူးတာ (Sushruta) တို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို အာရေဗျ ဘာသာစကားသို့ပြန်ဆိုခဲ့ပြီး၊ အစ်စလမ် သမားတော်များသည် ဆေးပညာသုတေသန လုပ်ငန်းများကို သိသိသာသာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ အစ်စလမ် ဆေးပညာလောက၏ ဦးဆောင်လမ်းပြဖြစ်သူ ပညာရှင် အစ်ဘင်စီနာ (Avicenna) ကိုလည်း အင်လတတ် (Imhotep) နှင့် ဟစ်ပိုကရေးတီး နည်းတူ ဆေးပညာ၏ ဖခင်ဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။ သူ၏ The Canon of Medicine မှာ ဆေးပညာ အမိုင်းတလျောက် အ‌‌ေကျာ်ကြားဆုံးသော စာအုပ်များအနက်မှ တစ်အုပ်ဖြစ်သည်။ ရေးဇစ်စ် (Rhazes) သည် အလယ်ခေတ် အနောက်ပိုင်း နှင့် အစ်စလမ် ဆေးပညာ (medieval Western & medieval Islamic Medicine) တွင် နာမည်ကြီးနေသော ဂရိတို့၏ Humorism သီအိုရီကို မမှန်ကြောင်း မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည့် ပထမဆုံးသူ ဖြစ်သည်။ သူသည် ဝက်သက် (measles) နှင့် ကျောက်ရောဂါ (small pox) ကို ပထမဆုံး အမျိုးအစားခွဲခဲ့သည့်သူ ဖြစ်သည်။ အစ်စလမ်တို့၏ ဘီအမ်ရတ်ဆတန် (Bimarestan) ဆေးရုံများမှာ အစောဆုံး ပြည်သူ့ဆေးရုံများ ဖြစ်သည်။
အာရပ်တို့ ဆေးပညာ ထွန်းပေါက်ခဲ့သော်လည်း ၁၄ ရာစုနှင့် ၁၅ ရာစုတွင် ဖြစ်ပွားသည့် မဲသေရောဂါ (Black Death) ကြောင့် ဥရောပကဲ့သို့ပင် အရှေ့အလည်ပိုင်းတွင် သေကြေမှုများစွာ ရှိခဲ့သည်။ အချို့က ဥရောပ ဆေးပညာသည် ပလိပ်ကပ်ရောဂါကို ကုသရာတွင် ပိုသာသည်ဟု ငြင်းခုံခဲ့ကြသည်။ ခေတ်သစ်ဆေးပညာခေတ် အစောပိုင်းတွင် ဆေးပညာနှင့် ခန္ဒာဗေဒ ပညာရှင်များဖြစ်သည့် ဂါဘလီရေ ဖလိုပီရို (Gabriele Falloppio) နှင့် ဝီလီယံ ဟာဗီ (William Harvey) တို့သည် ဥရောပမှ ပေါ်ထွန်းခဲ့သည်။
၁၄ ရာစုနှင့် ၁၅ ရာစု ပလိပ်ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားချိန်တွင် ဆေးပညာ အတွေးခေါ်များမှာ ယခင် ရှေးရိုးစွဲ ယူဆမှုများမှ သိပ္ပံနည်းကျ ဆေးပညာဘက်ကို တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ "ယခင်က ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတို့က မှန်သည်ဟု ပြောသည့်အတွက် မှန်သည်။ ထိုသူတို့ ပြောသည့်အတိုင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့ ပြောသည်မှ သွေဖီခဲ့ပါက မှားယွင်းသည်" ဟူသော ရှေးယူဆချက်များကို ငြင်းပယ်လာကြသည်။ ဗက်စလီးရက်စ် (Vesalius) ကဲ့သို့ သမားတော်များကလဲ အရင်က မှားယွင်းသော ယူဆချက်များကို မှန်ကန်အောင်၊ အချို့ယူဆချက်တို့ကို ပိုကောင်းအောင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
အန်ဒရေးယက် ဗက်စလီးရက်စ် (Andreas Vesalius) သည် အလွန်ကျော်ကြားခဲ့သော ခန္ဒာဗေဒစာအုပ်, De humani corporis fabrica, ကို ရေးသားခဲ့သည်။ ပြင်သစ် ခွဲစိတ်ပညာရှင် အွန်ပရော့စ် ပါလီ (Ambroise Paré) ကို ခွဲစိတ်ပညာရပ်၏ ဖခင်ဟု သတ်မှတ်ကြသည်။ ၁၆၇၆ တွင် အန်တိုနီ ဖှန် လူဝင်ဟွတ် (Antonie van Leeuwenhoek) က ဘက်တီးရီးယားနှင့် ပိုးမွားငယ်များကို အနုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး microbiology ဘာသာရပ်ကို စတင်ပေါ်ပေါက်စေခဲ့သည်။ ၁၆၂၈ ခုနှစ်တွင် ဝီလီယံ ဟာဗီ (William Harvey) မှ သွေးလည့်ပတ်မှုစနစ်ကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။
ကျောက်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးကို အက်ဝေါ့ ဂျန်နာ (Edward Jenner) က ၁၈ ရာစုနောက်ပိုင်းတွင် တွေ့ရှိပြီးနောက် သိပ္ပံနည်းကျသော ခေတ်သစ်ဆေးပညာက လွှမ်းမိုးလာခဲ့သည်။ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများ ကူးစက်ပျှံပွားပုံကို ၁၈၈၀ တွင် တွေ့ရှိခဲ့ပြီး၊ ၁၈၉၀ ခုနှစ်တွင် ပိုးသတ်ဆေးကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။
၁၉၀၈ ခုနှစ်တွင် အဆိပ်ရှိသော ဆိုးဆေးများကို ဘက်တီးရီးယားများက စုပ်ယူပြီး၊ လူ့ခန္ဒာဆဲလ်များက စုပ်ယူခြင်း မရှိသည်ကို တွေ့ရှိပြီး ပထမဆုံး ပိုးသတ်ဆေး (Arsphenamin) ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ပထမဆုံး ပိုးသတ်ဆေး အုပ်စုမှာ ဆာဖာလ် (Sulfa) ဆေးအုပ်စု ဖြစ်သည်။
ဆေးပညာကို အသုံးပြုပြီး ဆရာဝန် တစ်ဦးသည် လူနာ၏ ရောဂါကို ရှာဖွေခြင်း၊ ကုသခြင်းနှင်. ရောဂါ မဖြစ်ပွားစေရန် ကာကွယ်ခြင်းတို.ကို လုပ်ဆောင်သည်။ များသောအားဖြင်. ဆရာဝန်မှ လူနာအား မိတ်ဆက်ခြင်း၊ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းဖြင်. ဆရာဝန်-လူနာ ဆက်ဆံရေးကို စတင်ပြီး ရောဂါရာဇဝင်ကို မေးမြန်းခြင်း၊ လူနာအား စမ်းသပ်ခြင်း၊ လူနာမှတ်တမ်းရေးခြင်းတို.ကို ပြုလုပ်သည်။ လူနာကို စမ်းသပ်ရာတွင် နားကြပ် (stethoscope), အာရုံကြော တုန်.ပြန်မှုကို စမ်းသပ်ရန် ပလက်စတစ်တူအသေးစား (Reflex Hammer)၊ သာမိုမီတာ (Thermometer)၊ ဓာတ်မီး အစရှိသည်. ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုသည်။ လူနာခံစားရသော လက္ခဏာများ (symptoms)၊ လူနာကို စမ်းသပ်ပြီး တွေ.ရှိချက်များ (signs) ကို မှတ်သားပြီးနောက် လိုအပ်သော ဓာတ်ခွဲခန်း စစ်ဆေးမှုများ (သွေး၊ ဆီး၊ ဝမ်း၊ အစရှိသည်) ကို ပြုလုပ်ခြင်း၊ အသားစယူ၍ ဓာတ်ခွဲခန်းပို. စစ်ဆေးစေခြင်း၊ ဆေးပေးခြင်း၊ အခြားကုသနည်းများဖြင်. ကုသခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ပေလိမ်.မည်။ မေးမြန်း၊ စမ်းသပ်၊ စစ်ဆေးခြင်းမှ ရရှိလာသော အချက်များကို မူတည်၍ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ရောဂါများကို သတ်မှတ်ရလေသည်။ လူနာအား သိသင်.သိထိုက်သော အချက်အလက်များကို ရှင်းပြခြင်းဖြင်. ဆရာဝန်-လူနာ ဆက်ဆံရေး ခိုင်မြဲအောင်၊ လူနာ ယုံကြည်ကိုးစားလာအောင် ဆောင်ရွက်ရပေသည်။ စမ်းသပ်၊ စစ်ဆေးတွေ.ရှိချက်များ၊ ကုသချက်များ အားလုံးကိုလဲ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများနှင်. ထားရှိရပြီး နောင်လိုအပ်ချိန် သို.မဟုတ် တရားရင်ဆိုင်ချိန်တွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ လူနာကို တကြိမ်တခါထဲနဲ. ကုသရုံသာမက လိုအပ်သလို ရက်ချိန်းပေးပြီး အခြေအနေ ပြန်လည် သုံးသပ်ခြင်းကို ပြုလုပ်ရပေသည်။ ရက်ချိန်းပြန်ပြရာတွင် စမ်းသပ်မှုများမှာ ပထမဆုံးအကြိမ်ကဲ.သို. အချိန်မကြာပေ။
Chief Complaint (cc) : လူနာ ဆေးရုံ သို.မဟုတ် ဆေးခန်းကို လာရောက်ရသည်. အဓိက အကြောင်းအရာ ဖြစ်သည်။ လူနာပြောသော စကားလုံးအတိုင်း မှတ်သားလေ.ရှိပြီး လက္ခဏာခံစားရသည်. အချိန်ပမာဏပါ ထည်.သွင်း မှတ်သားသည်။ (ဥပမာ - ၂ နာရီကြာ ဗိုက်အောင်.ခြင်း)
History of Present Illness (HOPI) – လူနာ ခံစားရသည်. လက္ခဏာများကို စတင် ဖြစ်ပေါ်လာသည်မှ အစပြုပြီး မေးသားရသည်။ လိုအပ်သော အကြောင်းအရာများကို ထည်.သွင်း မေးမြန်းရသည်။ (ဥပမာ - လွန်ခဲ.သော ၂ နာရီက ထမင်းစားတယ်။ ထမင်းစားပြီး ဗိုက်အောင်.လာတယ်။ ရင်ခေါင်းကနေ ပူပြီး အောင်.တယ်။ လှဲလို.လဲ မသက်သာ၊ ထိုင်လို.လဲ မသက်သာ ဖြစ်နေတယ်။ လေဆေးစားကြည်.ပေမဲ. မထူးခြားဘူး။ အန်တော. မအန်ဘူး။)
Medications (Rx) – လက်ရှိ သုံးစွဲနေသော ဆေးများ (အနောက်တိုင်းဆေး၊ မြန်မာဆေး၊ တိုင်းရင်းဆေး၊ ဆေးရွက်၊ ရိုးရာကုထုံးများ)၊ ဆေးမတည်.ခြင်းများကို မေးမြန်းရသည်။
Past Medical History (PMH) – ယခင်က အလားတူ ရောဂါဖြစ်ဖူးခြင်း ရှိမရှိ၊ အခြားဖြစ်ဘူးသော ရောဂါ၊ ခွဲစိတ်ခံရခြင်း၊ မတော်တဆ ထိခိုက်ခြင်း၊ ဆေးရုံတက် ကုသခံရခြင်းများ စသည်တို.ကို မေးမြန်းရသည်။ ယခင် ဆေးမှတ်တမ်းဟောင်းများသည် ရောဂါ ရှာဖွေ၊ ကုသရှာတွင် အလွန် အရေးပါပါသည်။
Social History (SH) – မွေးရပ်၊ လက်ရှိ နေထိုင်ရာ နေရာ၊ အိမ်ထောင်စု ဦးရေ၊ အိမ်ထောင် အခြေအနေ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ဝင်ငွေ၊ ဆေးလိပ်၊ အရက် သုံးစွဲခြင်း၊ ထမင်းစားသုံးမှု ပုံစံ အစရှိသည်တို.ကို မေးမြန်းရသည်။
Family History (FH) – မိသားစုဝင် သို.မဟုတ် အတူနေ သို.မဟုတ် အိမ်နီးချင်းများတွင် အလားတူ ရောဂါဖြစ်ခြင်း ရှိမရှိ၊ ယခင်က ရောဂါဖြစ်ဖူးခြင်း ရှိမရှိ၊ မိသားစုဝင်များတွင် အခြား မျိုးရိုးလိုက် ရောဂါဖြစ်ဖူးခြင်း ရှိမရှိ
System Review – မေးမြန်းချိန်တွင် ကျန်ခဲ.နိုင်သည်. အချက်အလက်များကို မကျန်စေရန် တကိုယ်လုံး ခြုံငုံပြီး မေးမြန်းခြင်း (နှလုံးနှင်. သွေးကြောဆိုင်ရာ၊ အဆုတ်နှင်. ဆိုင်ရာ၊ အစာအိမ် အူလမ်းကြောင်းနှင်. ဆိုင်ရာ၊ ဆီးလမ်းကြောင်းနှင်. ဆိုင်ရာ၊ ဦးနှောက်နှင်. အာရုံကြောနှင်. ဆိုင်ရာ)၊ အခြား သတိမထားမိသော အချက်အလက်များ (ကိုယ်အလေးချိန် လျော.သွားခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ အလုံး၊ အကျိတ် စမ်းမိခြင်း)
လူနာအား စမ်းသပ်ရာတွင် ဆရာဝန် သို.မဟုတ် ကျန်းမာရေး စောင်.ရှောက်မှုပေးသူသည် အမြင်၊ အကြား၊ အထိ အတွေ.၊ အနံ.အာရုံ စသည်တို.ကို အသုံးချရသည်။ အခြေခံ စမ်းသပ်မှုတွင် အဆင်. (၄) ဆင်.ရှိသည်။ ကြည်.ရှုခြင်း (inspection)၊ ကိုင်တွယ် ထိတွေ.ခြင်း (Palpation), အသံကို မူတည်ပြီး ဆုံးဖြတ်ရန် လူနာကိုယ်ပေါ် လက်ချောင်းတင်ပြီး ထိုလက်ချောင်းကို အခြားလက်တဖက်ဖြင်. ခေါက်ခြင်း (Percussion), နားထောင်ခြင်း (Ascultation) တို.ဖြစ်သည်။ စမ်းသပ်သည်. ကိုယ် အစိတ်အပိုင်းပေါ် မူတည်ပြီး အစီအစဉ်ကွဲပြားခြင်း ရှိနိုင်သည်။ ဥပမာ - အရိုးအား စမ်းသပ်ရာတွင် ကြည်.ခြင်း (look), ကိုင်တွယ်ခြင်း (feel), လှုပ်ရှားခြင်း (move) ဆိုပြီး ကွဲပြားသွားသည်။
ဗိုက်နှင်. အစာလမ်းကြောင်း (ကိုယ်ဝန်ရှိက ကလေးအခြေအနေ)
ဦးနှောက်နှင်. အာရုံကြောဆိုင်ရာများ (သတိလစ်နေလား၊ အမြင်အာရုံကောင်းလား၊ အာရုံကြော ကောင်းလား စသည်)